Mhedzisiro yekuyedza inogara isina kururama here? Chinokosha kuita zvinhu izvi zvakanaka | Xipingzhe
Nekuvandudzwa kwehupfumi pamwe nenzanga, kuitira kuzadzikisa zvidikanwi zvakasiyana, saka maindasitiri kana minda senge CDC, kuyedza chikafu, makambani emishonga, masainzi ekutsvagisa, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, sisitimu yemvura, masisitimu petrochemical, masystem emagetsi, nezvimwe zvese murabhoritari. Panguva imwecheteyo, angangoita marabhoritari ese akasangana nedambudziko rakafanana, ndiko kuti, chokwadi chemiedzo yekuyedza nguva dzose chisina kururama! Iri idambudziko hombe.
Zvikonzero zveichi chiitiko zvinogona kupfupikiswa seinotevera:
(1) Mitemo yelabhoritari nemirau zvinoda kukurumidza kuvandudzwa
Rabhoritari yakura inofanirwa kunge iine seti yemirau yakaoma uye inosimbisa nemirau. Izvi zvakakosha zvikuru. Kana paine mamiriro ezvinhu apo vanoedza vanoshanda vachityora mirau panguva yekuyedza, zvishandiso zvisina kuchengetedzwa zvakanaka, marekodhi ekuyedza, uye nharaunda yekuyedza yakanganisa, hongu, zvinokanganisa zvakananga kana zvisina kunangana kururamisa kwemhedzisiro yekuyedza.
(2) Hunhu hwesampuli yezviridzwa uye ma reagents anodiwa pakuedza haana kukodzera
Kunyangwe marabhoritari mazhinji akamira nevashandi venguva refu vemushandirapamwe, havana kuzopedzisa basa rekugashira nenguva pavakagamuchira zvinhu izvi. Zvimwe zvekuyedza zviridzwa, kunyanya zviyero zvekuyera zvakaita semayedzo machubhu, kuyera makapu, mativi matatu, uye mabhodhoro evhoriyamu, hazvina kuwanikwa zvisina kukodzera mushure mekuyedzwa kwakawanda. Uye zvakare, chiitiko chemishonga isina kukwana, reagents, uye mafuta ekuzora zvakavanzika uye hazvisi nyore kuona. Mhedzisiro yematambudziko aya anozopihwa kudzoka kune yekupedzisira data rekuyedza.
(3) Matambudziko nekuchenesa marabhoritari zvishandiso nemidziyo
Kuchenesa-kwemahara kuchenesa chinhu chinodiwa pakuongorora kwakaringana kwekuyedza. Zvisinei, ma laboratori mazhinji achiri kuita basa rekuchenesa remaoko. Izvi hazvisi zvekungoshanda chete, asi zvakare zvinotungamira kune akaomarara uye akaoma ekuyera mhedzisiro zviyero uye manhamba. Zvinoenderana neyakavimbika data data, inopfuura 50% yechokwadi chemiedzo yekuyedza inoenderana nekuchena kwemidziyo inoshandiswa mukuyedza.
Naizvozvo, mapato akakodzera anogona kugadzirisa zvakakwana zvichibva pazvinhu zviri pamusoro, zvinozovandudza huwandu hwese hwerabhoritari kusanganisira kunyatsoita mhedzisiro yekuyedza.
Chekutanga pane zvese, zvakafanira kugadzirisa masisitimu ezvese marabhoritari, kuita basa rakanaka mukumisikidza uye kudzidzisa kuzivisa kwakakodzera kwenhengo dzechikwata chekuyedza, uye nekuita manejimendi ane mutoro. Zadza marekodhi ekuyedza, buda mhedzisiro yekuongorora, uye shandisa izvi sehwaro hwemubairo, chirango uye ongororo panomuka kusawirirana.
Kechipiri, chengeta, nyora, uye ongorora mishonga inowanzo shandiswa uye magirazi. Kana zvikaonekwa kuti hunhu hunofungidzira, hunofanirwa kuziviswa kumadhipatimendi akakodzera uye vatungamiriri kuti vabate nenguva kuti vaone kuti kuyedza hakukanganisike.
Yetatu, shandisa yakazara otomatiki giraziware washer kutsiva mashandiro ekuwacha emawoko. Machine-based, batch-based, uye akangwara kuchenesa kwemarabhoritari midziyo ndiyo yakajairwa maitiro. Parizvino, marabhoritari akawanda munyika medu akagadzirisa marabhoritari ekutsvaira uye kutapudza utachiona kuti aachenese uye asatsemura. Inowirirana yekuchenesa michina, senge dzakateedzana zvigadzirwa zvakagadzirwa neHangzhou XPZ, kwete chete zvine humanized mashandiro, kunze kwevashandi, mvura nemagetsi simba, zvinotonyanya kukosha, iyo yekuchenesa kugona kwakanyanya-maitiro ese akaenzana, mhedzisiro inowirirana, uye yakawanda Iyo data inotsvaga. Nenzira iyi, zvirevo zvekururama kwemhedzisiro yekuedzwa zvinopihwa kusvika padanho rakakura.